Masangano Akazvimirira Oramba Kupinda Musangano weKimberley Process
Gumiguru 04, 2011
Masangano akazvimirira ega musangano reKimberley Process ati acharamba kupinda musangano mukuru weKP uyo uchaitirwa kuKinshasa kuDemocratic Republic of Congo mukupera kwemwedzi uno.
Masangano aya ati haasi kufara nemashandiro ari kuita KP mukutadza kupedza kwayo matambudziko uye kumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu munyika dzinocherwa mangoda dzakaita seZimbabwe, DRC, Angola nedzimwe.
VaAllan Martin weAfrica Partnership Canada vaudza Studio 7 kuti KP yarasa gwara saka masangano akazvimirira acharamba kupinda mumusangano uyu.
VaShamiso Mtisi, vanove nhumwa yeLocal Focal Point muKimberley Process vati sangano iri riri kutadza kuita ongororo yakanaka uye zvizhinji zvangova mazvake mazvake, chinova chinhu chavati chinofanira kugadziriswa.
VaMtisi vati kunyange hazvo vaine kutsutsumwa nedanho reKP, vari kufara kuti kekutanga kubva nyaya yekwaMarange yatanga, bazi rezvemighodhi kuburikidza negurukota remighodhi VaObert Mpofu, vakadaidza masangano akazvimirira ose emunyika anosanganisira Crisis Coalition in Zimbabwe, Centre for Research and Development in Zimbabwe, magweta nevamwe, kuti vakurukura pamusoro penyaya yemangoda emuZimbabwe uye kuti zvinhu zvofambiswa sei kuti nyika iwane pundutso.
Gurukota rezvmighodhi VaObert Mpofu vatiwo vari kufara nehukama hwavatanga kugadzirisa nemasangano akazvimirira munyaya yemangoda nezvicherwa munyika.